Dell's Clog (Clogging = Bloglọ ọrụ ịde blọgụ) | Martech Zone
Dell's Clog (Clogging = ratede blọgụ ụlọ ọrụ)
Friday, July 14, 2006 Tuesday, July 4, 2017 Douglas Karr
Dell kwalitere clog ha n'izu a, Otu2one. Enweela ọtụtụ ederede banyere ya na blogosphere… ụfọdụ ndị folks na-eto ha na ụfọdụ na-etinye ha. Ekwenyeghi m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla edeela okwu a, mana okwu a bụ 'Clog' maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ Blog Corporate. M kwukwara ya dị ka a disambiguous okwu na wikipedia. Blọọgụ ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ ngọzi ma ọ bụ ọbụbụ ọnụ. Ọ chọrọ atụmatụ na nhazi nke ndị na-ede blọgụ gụnyere iji mee Clog:
Dị mkpa - blog gị ọ na-ejere ụlọ ọrụ ahụ ozi? ndị ahịa? atụmanya? mpi?
Oge - mgbe ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe ọma mere, blog gị ọ bụ akụkụ nke atụmatụ ngwa ngwa iji nweta okwu ahụ?
Eziokwu - na-enweghị nkọwa gory, ị na-anọ n'ihu ndị na-agụ akwụkwọ gị ka ị ga-etinye ya na ya?
Bara uru - ọ ga - enyere azụmahịa gị aka ogologo oge?
Clogging nwere ike ụda obere na-adịghị mma, nke ahụ bụ na nzube. Enwere m olile anya na a nabatara okwu a na ụwa niile, n'ihi na ejighị m n'aka na clogging bụ atụmatụ dị mma maka ụlọ ọrụ. Nke ahụ kwuru, anaghị m ekwu na ịde blọgụ dị njọ maka atụmatụ ụlọ ọrụ. Dị nnọọ iche, Echere m na ọ bụ kediegwu. Agbanyeghị, echere m na enwere ọdịiche dị iche n'etiti ịde blọgụ na igbochi. Site na ịde blọgụ, onye ahụ nwere olu ma nwee ike igosipụta mmetụta ya n'eziokwu n'echeghị echiche banyere nsogbu. Clogging, n'aka nke ọzọ, kwesịrị ịbụ mkpokọta olu nke ụlọ ọrụ. Ọ nụchara. Ọ ghaghị ịbụ.
Dell enwetala ụfọdụ nkpa as foto nke laptọọpụ na-afụ na Japan enwetaghị ya na Clog ha ka akụkọ na-agba gburugburu blogosphere.
Nnukwu ndudue! Gịnị kpatara nke ahụ? Kedu ihe kpatara ị ga - eji chọọ ịgwa ụwa okwu nwere ike ịbụ naanị mmadụ ole na ole maara banyere ya? Maka na i meghị ya, ihe egwu dị na ya buru ibu.
Ka ị na-enyocha blọọgụ maka Dell ugbu a, ị ga-ahụ Laptọọpụ na-agbawa agbawa nso n’elu ndepụta ahụ! Jụọ onwe gị nke a… ka ị na-agabiga isi akụkọ na nsonaazụ ọchụchọ ahụ, ị ​​hụrụ otu isiokwu si One2one na-akpali mmasị? You chọtara ya na ndepụta ahụ?
Gbachi nkịtị na-egbu ndị na-azụ ahịa obi ike. Site na ịde blọgụ, ụlọ ọrụ na-enye usoro iji nwee nkwurịta okwu nke ọma. Mgbe ọ naghị egosi na ha blog mbụ, ọkụ eletrik mara na a na-eleghara ya anya. N’ihi nke a, e chere na akpachi ahụ adịghị mkpa, n’oge na-adịghị mma, akwụwaghị aka ọtọ na uru.
VOIP buru ibu Skype nwere ike ịbụ onye na-esote na ndepụta ahụ. Na nso nso a, ụfọdụ ndị mmepe na China ekwuola na ha gbanwere ihe ezoro ezo nke Skype ma jiri sọftụwia ha kpọọ onye ọzọ ma mee ka ha mata adreesị IP ha. Nke a nwere nnukwu ihe metụtara Skype, na-etinye izo ya ezo na ajụjụ. Kama ịwakpo nkwupụta ahụ, Skype kpochapụrụ ya. Nke a agaghị adị mma maka ndị ọrụ ịntanetị na-agwụ ike. Amaara m na achọghị m itinye ya n'ihe egwu.
Yabụ, kedu usoro ọgbako gị? Kama ikwu banyere ihe ị dị njikere ịkọrọ ndị mmadụ (na asọmpi nke gị), kedu ihe ị bụ ọ bụghị dị njikere ikwurịta? Ọ bụ isiokwu ndị ahụ ga-abịaghachi ịta gị!
Tags: ngọngọmechieụlọ ọrụ blogDell
Douglas Karr Friday, July 14, 2006 Tuesday, July 4, 2017
Nielsen Na-atụle Apụl na Oranges, Podcasting na Blogging
Ala Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe na Ihe Nlereanya nke Otu Web Ga-esi Nyere Aka
Aug 17, 2006 na 3:03 PM
ama m na obu cheesy mana ahuru m okwu ahu n'anya.
biko ị nwere ike ime dougissmart ka dougissexy?
Aug 17, 2006 na 6:21 PM
dougissexy nọ n'ebe ahụ! Ikwesiri ịza ajụjụ mgbe mgbe.